Spain kuthandwa kakhulu phakathi abathandi travel. Futhi wonke umuntu uhlela uhambo oluya lokhu noma lokhuya lizwe, okokuqala izimangaliso: lapho bayophila ngamaholide? Into enhle, esikhathini sethu ukuze uthole ihhotela elifanelekayo akuyona inkinga. Ihhotela Acapulco 4 *, ngasendleleni, kuyoba kukho emangalisayo.
Spain - ezweni okungukuthi ngakolunye uhlangothi ngu-Atlantic Ocean, kanye ngakolunye - lubhekisele oLwandle iMedithera. Nasi, isimo sezulu esihle omnene. I-annual ukushisa okuvamile kuba degrees 20. Akumangalisi ukuthi abaningi ekuhambeni eholidini ilapha.
Futhi-ke, e-Spain kukhona zokungcebeleka eziningana. Omunye ethandwa kakhulu kuyinto Lloret de Mar Lokhu umasipala itholakala amakhilomitha 75 kusukela Barcelona. Kuyaqapheleka njengoba resort ngobukhulu futhi edume kunazo ogwini Costa Brava. Kulapha futhi 4 * Ihhotela Acapulco.
Ihhotela ikhona umusho wesibili. Ukuze kolwandle ungahamba imizuzu 5 endleleni, itholakala eziseduze, futhi sebhasi. Ihhotela yakhiwe endaweni enhle, ngoba lapha drive ngomzuzu 35-40, futhi Girona Airport. Futhi eceleni kwehhotela ngokwalo kukhona izitolo eziningi, amathilomu, iminyuziyamu kanye nezinye izindawo ezithakazelisayo. Ngokuvamile - okudingayo ukuze izivakashi.
I Ihhotela Acapulco 4 * konke kuzosiza ukwenza ezokungcebeleka amaholide zikhanga ngisho nakakhulu futhi zihlukahlukene. Kuvele ongaphandle indawo yokubhukuda bese ilanga ithala engadini kanye. Chitha kusihlwa imibukiso lapha opopayi. Nokho, ihhotela has nightclub nge DJ.
Ukuhlala lapha eholidini, kufanele nakanjani ukuchitha ezinye diving isikhathi Snorkelling. Noma ungaya diving wenze - ithuba elinjalo inikezwe.
Abathandi yokuphila asebenzayo ungakwazi ukuqasha amabhayisekili amabili futhi ukuhamba kule imoto by County - eziningi kangaka ukukwenza lapha. Uma ungafuni ukuba ashiye ehhotela, kukhona inketho avakashele igumbi Billiard noma ujabulele Jacuzzi. Abavakashi abafisa ukubuyela ekhaya bronzed, kungcono uvakashela solarium. Futhi okwamanje ihhotela has a emakhazeni massage. Ngakho, njengoba ungabona, ngisho nokuhlala endaweni eyinkimbinkimbi, ngeke be bored.
By the way, ngaphakathi 3 km kusukela ehhotela kukhona igalfu okukhulu. Abalandeli walo mdlalo angaya ukubukeka.
Yini enye engingabuye lapho ihhotela?
I Ihhotela Acapulco 4 * lonke eziyinkimbinkimbi has a Wi-Fi yamahhala. Lokho wayengumuntu isatholakala emakamelweni, kuzomele ukhokhe extra, kodwa njengoba besho abanye izivakashi, inthanethi wireless "waba ekubambeni" futhi in the amafulethi.
Kukhona yangasese yokupaka indawo kubiza 15 Euro ngosuku. Mahhala inkonzo concierge, ukuvakasha edeskini futhi iwashi reception. Okuningi ensimini ka-ATM futhi umthwalo USB. Kukhona Ihhovisi exchange - lapho ungakwazi zishintshe imali, uma ekhaya ungenayo isikhathi ukukwenza.
Futhi e isakhiwo kukhona iphuzu nge ngefeksi kanye nezinsizakalo amakhophi, ngisho isikhungo ibhizinisi kanye ikamelo lengqungquthela. Kuvame kwaqashwa ukuhlela imicimbi ehlukahlukene ezibalulekile.
Ezinganeni ihhotela has a endaweni play, futhi emgwaqeni - endaweni ehlukile.
I Ihhotela Acapulco 4 * (Spain), ngemisebenzi emihle. Lona ungomunye walabo amahhotela, okuyinto bayabakhathalela ngempela izivakashi. Amakamelo bahlanza nsuku zonke, njalo ukushintsha amashidi kanye amathawula. Uma izivakashi kudingeka abangayithola esikhumulweni sezindiza, noma uthathe noma nenye indawo (Izimali isicelo). Kukhona igumbi ehlukile ababhemayo.
Ehhotela uzophawula ngisho mini-emakethe. Lena kulabo abafuna ukuthenga okuthile, kodwa ngaphandle kwehhotela akafuni ukushiya. By the way, isitolo isikhumbuzo ehhotela kakhulu.
Uma izivakashi kuyoba abandayo efulethini, bangaxhumana bafudumale. Badinga ezokuthutha siqu? Ukuqashisa imoto siyonikwa. Kuhlelwe ukuvakasha usuku lonke? Abasebenzi ngeke ukupakisha nezivakashi zikuyise. Ngisho fresh emaphephandabeni endawo silethwa izivakashi nsuku zonke, kanye ukudla neziphuzo.
Ihhotela Acapulco Ihhotela 4 * (Lloret de Mar) litholakale VIP-service, igumbi umndeni, amafulethi non-ukubhema kubantu abakhubazekile. By the way, ukufinyelela ku-izitezi ngumuntu lift.
Lokhu Ihhotela yokuhlala Acapulco 4 * (Spain), isithombe okuyinto uvezwa ngenhla, banakekele induduzo izivakashi, kungakhathaliseki ukuthi zezwe ezivela kulo. Bonke abakhona bazizwe ngizolile, ekuphathweni baqasha abasebenzi ukuthi okhuluma izilimi eziyisikhombisa ezehlukene. Okubaluleke kakhulu - phakathi kwabo kukhona Russian! Ngaphandle kwakhe, izisebenzi has ngaphezulu Catalan, isiJalimane, isiNgisi, iSpanishi, isiFulentshi futhi Italy.
Okuningi ku Acapulco Ihhotela 4 * (Costa Brava), ibha nge ezihlukahlukene iziphuzo kanye yokudlela usebenza on uhlelo lezitsha. Lapha, izivakashi zingajabulela zakwamanye amazwe nezalapha. Uma wayefisa, izivakashi kungaletha ibhulakufesi ekamelweni lakho. Futhi namanje zikhona etholakalayo amamenyu akhethekile wezokudla. Kodwa lena kuphela isicelo.
Futhi ngisho noma izivakashi lapha lwami lokuzalwa (noma-ke kuyoba phakathi nokuvakasha kwazo), basuke bahlangana kunconywa. Kungokufanayo ihlelwe for honeymooners.
By the way, ihhotela angazamukela ngisho nezilwane ezifuyiwe. le sevisi kuphela kufanele esihlelwe nesimiso sokuqondisa. Oku-isidingo baxhumane nge ukubekwa into. Kungenzeka ukuthi i-service kuyodingeka bakhokhe.
Acapulco 4 * (Spain) inikeza ezihlukahlukene ikamelo izinhlobo ongakhetha kuzo. Futhi kufanele kuqale ezingabizi kakhulu.
Ngakho lokhu 2 embhedeni-amafulethi nge kuvulandi yangasese. Le ndawo ingqikithi igumbi 15 square metres. m. Ngaphakathi imibhede emibili emikhulu olulodwa. Bathi ume emakamelweni eduze komunye nomunye, ukuze kubonakala sengathi phakathi efulethini flaunts umbhede omkhulu, uma iqhathaniswa nayo lapho ngisho nenkosi-usayizi elincane kakhulu.
Ikamelo has a plasma TV neziteshi satellite, air conditioning, ngocingo, umsebenzi edeskini futhi esiqandisini. Kukhona yokugezela yangasese, ngigeza futhi Izinsiza khulula. By endleleni, le sevisi itholakala izivakashi, "Wake Up".
7 nobusuku Igumbi izobiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 70-75 amabili (nge ibhodi ngokugcwele).
Kukhona leli hhotela okunye ukukhetha 2 embhedeni-amafulethi. endaweni yabo ingaphezu - ke uyalingana 20 square metres. m. Ngaphakathi kungaba khona umbhede double esikhulu kakhulu futhi embhedeni ezimbili ejwayelekile noma inkosi-usayizi.
Izivakashi abafisa ukuhlala kuleli gumbi, ithala kwanikeza yangasese, kanye nazo zonke izimo izotholakala, okuyinto eye yachazwa ngaphambili. Intengo yalezi zokuhlala ngeke zinkulungwane 85. Hlikihla. (Futhi ngosuku 7 nge ibhodi ngokugcwele).
Standard egumbini embhedeni-3 ne Izinsiza efanayo aphakeme we ezimbili. Kuphela ngaphakathi kungaba ezintathu ezihlukene noma endinganisweni efanayo imibhede bese omunye double. ama-ruble ayizigidi 75-80 kuyoba okukhethwa kukho ezintathu. It angaphila 2 abadala 1 ingane eneminyaka engaphansi kwengu-iminyaka emibili. Nokho, kukhona amafulethi embhedeni-3, lapho izivakashi zivunyelwe ukuhlala ibuphi ubudala. Kodwa izobiza mayelana 95 000 ruble.
Amakamelo okulala awabange izinkampani ezinkulu
Esikhathini ehhotela kukhona okuningi ibe banzi. Rest inkampani enkulu futhi enobungane - yini kangcono? Ukuze wenze lokhu, nakuba wadala "Acapulco" (hotel). Spain amumethe amahhotela, lapho kukhona isibalo esikhulu, futhi lokhu - ke ngolunye lwalezo ongakhetha.
Area efulethini abantu abane kuyinto 45 square metres. m. Leli kamelo sehlukaniswe amakamelo amabili okulala. Esokuqala embhedeni 2-ezinkulu. In the yesibili - amabili ejwayelekile.
Ikamelo has ophumayo yayo siqu ithala ivulekile. Okuningi ngaphakathi plasma TV neziteshi satellite, air conditioning, zihlalo endaweni, igumbi sigqoka, parquet phansi, futhi konke isivele ebalwe ngasekuqaleni. Kodwa ngisho nakulezi amakamelo has ekhishini lalo. Inama isiqandisi, microwave, endaweni yokudlela, ikhishi izitsha, isitofu, ikhofi kanye cleaner. Ngisho emgwaqeni kukhona endaweni yokudlela. Indlu yangasese, eshaweni, umshini wokomisa izinwele, amathawula, nelineni, umshini wokuwasha - konke lokhu iyatholakala.
Ngokuvamile, le nombolo kungaba ngokuthi ephezulu grade amafulethi ukhululekile. Futhi ukuhlala isonto e kuzobiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 170 for amane (ibhodi ngokugcwele). Uma izivakashi ukhetha azilungiselele, bahlale nge kwasekuseni. Izokubiza ecishe ibe yizinkulungwane 140. Hlikihla.
Lokho ukutshela izivakashi?
Ekugcineni - a amazwi ambalwa Okusele ukuhlala Ihhotela Acapulco 4 * (Spain) ukubuyekezwa. Amazwana ogxile omuhle. Ukugubha ukunakekelwa abasebenzi nobungane futhi ube usizo abakhuluma isiRashiya futhi ekulungele ukusisiza ngeseluleko nganoma yisiphi isikhathi. Good, fresh, ukudla okumnandi, ngakho kungcono ukuthatha ebhodini okugcwele ngesikhathi esisodwa. Ekudleni okuningi inyama eziyothokozisa abalandeli okunama-kilojoule amaningi ukudla. Ngezikhathi zakusihlwa indaba ephathwayo nobusuku show ezithakazelisayo. Amagumbi bahlanza kunembeza, libuyisele amanzi imoto, conditioner, eshaweni gel.
Phumula kule ndawo, ikakhulukazi intsha uthanda. Ngo Lloret de Mar Luningi kuma-nightclub, imigoqo kanye zokudlela. Edolobheni elichwazayo cishe phakathi kwamabili - intsha nijabula, + ihamba futhi ukuzijabulisa. Ngoba, uma ufuna ukuthulisa, noma ukubukeka kangcono esinye inketho, noma ulungele ukuvala amafasitela ebusuku.
Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuya ikude kolwandle (ibanga, kuyafaneleka ukukhumbula amamitha angaba ngu-500). Kodwa ungenza uhambo uya olwandle more okuthakazelisayo, uma uhamba emigwaqweni, izitolo, amathilomu kanye isikhumbuzo emathileyi.
Ngokuvamile kuba 4-ihhotela lezinkanyezi ezinhle, okuyinto uphelele kubantu abafuna ukuchitha amaholide abo ngenkuthalo.
Palais des Iles 4 * (Tunisia, Djerba): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Funda indlela ukupheka ebhali ukudoba